Ashine R&D centre dia manolo-tena amin'ny fikolokoloana sy ny fandefasana teknolojia ary miara-miasa amin'ny University Sichuan, University of Xiamen, ary ireo mpampianatra avy any Etazonia. Miaraka amin'izany, Ashine dia afaka manome vokatra avo lenta ary manana fahaiza-manao teknika vaovao kokoa hamahana ireo olana isan-karazany amin'ny fikosoham-bary sy ny poloney ho an'ny mpanjifa.
Miaraka amin'ny lanjanay avo lenta amin'ny vokatra tsy miovaova, ny fahatokisana ary ny fahamendrehana miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminay, ary ny R&D matanjaka sy ny fanavaozana, manantena mafy izahay fa hanohy hiasa sy hampifamatotra ny fifandraisanay miaraka amin'ireo mpiara-miasa manerantany.
Ashine dia miavaka amin'ity orinasa ity amin'ny alàlan'ny fitaovana avo lenta, ary ny ekipanay R&D dia miantoka fa manana ny fahaizany miteny i Ashine amin'ny alàlan'ny vokatra ihany. Ny ekipa R&D an'ny Ashine dia mandrafitra ny fototra fampandrosoana mafy orina ho an'ny orinasa hanehoana ny tsy fitovizan'ny vokatra, ny fironana amin'ny tsena ary ny filan'ny mpanjifa.
Kodiarana mifangaro vy Diamond mifamatotra, Trapezoids Diamond Grinding Shoes, Kiraro fitotoana beton, Kiraro fanaovana diamondra, Kiraro fitotoana PCD, Pads polishing vita amin'ny beton,